Izindaba - Imiyalo yokusebenza nokugcina i-aminoguanidine bicarbonate
I-Aminoguanidine bicarbonate iyikhemikhali enobuthi, ngakho-ke inezidingo ezikhethekile kwisitoreji esijwayelekile. Kuyadingeka ukuzigcina ukuqinisekisa ukuphepha kwemikhiqizo nabasebenzi. Nazi ezinye izindlela zokuqapha okufanele uziqaphele.
1. Kufanele igcinwe endaweni epholile futhi enomoya, ngoba i-aminoguanidine bicarbonate ayizinzile uma ishiswa. Lapho izinga lokushisa seliphakeme kuno-50 ℃, lizoqala ukubola, elizothinta ukusebenza kwalo. Ngakho-ke, naka ukulawula izinga lokushisa nomswakama wesitolo.
2. I-Aminoguanidine bicarbonate inobuthi. Kufanele igcinwe endaweni yokugcina impahla ekhethekile enezimpawu zokuxwayisa ngokuphepha, ezingasetshenziswa ngabantu ngokuthanda kwabo.
3. Yenza umsebenzi omuhle ekuphathweni kwansuku zonke, uthathe futhi usebenzise i-aminoguanidine bicarbonate kumele igcinwe kwirejista enhle, ukuvikela ukuthi izinto zilahleke noma zisetshenziswe ngokungakhethi.
Ngakho-ke, ngesikhathi kugcinwa i-aminoguanidine bicarbonate, lezi zinto ezingenhla kufanele zinakwe kakhulu, ukuze kuqinisekiswe ukuphepha.
I-Aminoguanidine bicarbonate kufanele inakwe kakhulu ekusebenziseni, ngoba iyikhemikhali enobuthi. Ukusetshenziswa okulungile kungaqinisekisa ukuphepha kwama-opharetha. Nazi izinto ezimbalwa zokusebenza kokuphepha okufanele wazi kahle ngaphambi kokusebenzisa i-aminoguanidine bicarbonate.
1. Uma basebenzisa i-aminoguanidine bicarbonate, ama-opharetha kufanele anake ukuvikelwa kokuphepha. Gwema ukuthintana ngqo ne-aminoguanidine bicarbonate enamehlo nesikhumba, ngaphandle kwalokho izolimaza umzimba kakhulu.
2. Bhekisisa ukuvimbela ukuvuza nokuvinjelwa kokuchichima, futhi unake ngokukhethekile ukungavumeli i-aminoguanidine bicarbonate ingene endle, kungenjalo izongcolisa umthombo wamanzi.
3. Ngaphambi nangemva kokusebenzisa i-aminoguanidine bicarbonate, phatha amagilavu ​​asetshenzisiwe ngokucophelela. Izilwane kumele zinake ukubulala amagciwane.
Ngamagama ambalwa, ukusetshenziswa kwe-aminoguanidine bicarbonate kubaluleke kakhulu. Kungasetshenziswa kuphela lapho isetshenziswe kahle.
Isikhathi Iposi: Aug-08-2020